I-Raw Methenolone Acetate Powers abavelisi kunye nabaThengisi-mveliso
I-methenolone ephakamileyo ye-Acetate powder (434-05-9)
I-methenolone I-acetate powder iyinyololic injectable / injectable i-anabolic steroid esetyenziswe ngabakhi bomzimba ukukhuthaza ukunyuka kwesisindo somzimba; ukuthintela ukusila kwemisipha nokukhuthaza ukusebenza kunye namandla.
I-Raw Methenolone i-Acetate powder (434-05-9) ividiyo
I-methenolone e-acetate powder (Raxx-434-05) Inkcazo
I-Methenolone i-Acetate powder, eyaziwa nangokuthi yi-primobolan, i-androgenic anabolic steroid ephuma kwi-dihydrotestosterone yaye ifunyanwa ngokuqhelekileyo njengowomlomo westerodi endaweni yokujova, kunye neepropati ze-androgenic ezibuthathaka. Ingasetyenziselwa ukunyangwa kwesifo somongo we-bone kunye ne-anemia, Kukhethwa ukwenziwa kobuchwephesha obuphezulu kunye nobutyhefu obuncinci obuqhathaniswa ne-17A-alkylated analogs. I-acetate ye-Metenolone yaziswa ngokusetyenziswa kwezobisi kwi-1961. Nangona kunjalo, ixhaphazwa rhoqo kwizemidlalo yabantu ngenxa yokukwazi ukunyusa amandla omzimba kunye nokukhuthaza ukusebenza kunye nobudlova. Iyakwazi ukuphucula ukusebenza kwii-horsehorses.
I-methenolone ephakamileyo ye-Acetate powder (434-05-9) Suqobo
Igama lemveliso I-Methenolone i-Acetate powder
Igama leKhemikhali NSC-74226; SH-567; SQ-16496; premobolan
uhlobo Numama Primobolan, uNibal
Iqela leziyobisi Androgen; I-Anabolic steroid; Androgen ester
Inani leCAS 434-05-9
I molecular WSibhozo 344.49
Ukuxuba Point 138-139 °
Sukufaneleka I-DMSO: <10mg / mL
Sisibetho Tukushisa kwi -20 ° C
Aukuguquka Njenge-anabolic steroid
Yintoni i-Raw Methenolone i-Acetate powder (434-05-9)?
I-Methenolone i-Acetate powder, eyaziwa nangokuthi yi-primobolan, i-androgenic anabolic steroid ephuma kwi-dihydrotestosterone yaye ifunyanwa ngokuqhelekileyo njengowomlomo westerodi endaweni yokujova, kunye neepropati ze-androgenic ezibuthathaka. Ingasetyenziselwa ukunyangwa kwesifo somongo we-bone kunye ne-anemia, Kukhethwa ukwenziwa kobuchwephesha obuphezulu kunye nobutyhefu obuncinci obuqhathaniswa ne-17A-alkylated analogs. I-acetate ye-Metenolone yaziswa ngokusetyenziswa kwezobisi kwi-1961. Nangona kunjalo, isetyenziswe rhoqo kwimidlalo yabantu ngenxa yokukwazi ukunyusa amandla omzimba kunye nokukhuthaza ukusebenza kunye nobudlova.
Indlela i-Raw metololone ye-Acetate powder (434-05-9) Sebenza
I-methenolone yiphumo le-DHT (okanye ukuba lichane ngakumbi - luhlobo olusungulwe ngokutsha lwe-DHT). Iqulethe intsebenziswano ephindwe kabini kwikhabhoni enye kunye neyesibini, ezinceda ukwandisa le-hormone ye-anabolic. Kwakhona ihamba neqela elongezelelweyo le-1-methyl elikhuselayo ekuqhekekeni kwe-hepatic. Ubukho be-acetate ester buyikhusela ngakumbi kwi-hepatic metabolism.
I-methenolone yama-acetate powder (434-05-9) Imilinganiselo
I-Oral Primobolan (i-Methenolone Acetate): Abasebenzisi bokuqala be-Primobolan baya kufumana i-50-100mg ububanzi bemihla ngemihla ukuba babe neqondo eliphumelelayo nge-oral Primobolan. Abasebenzisi abaphakathi baziwa ngokusebenzisa umlomo we-Primobolan kwi-100 - 150mg imihla ngemihla ngeempembelelo ezinkulu, kwaye abasebenzisi abaphambili baya kufumana uluhlu lwe-150 - 200mg nsuku zonke ukuba lusebenze kakuhle. Uhlobo oluthile lomlomo lwe-Primobolan lunye lwesibini ngomlomo we-anabolic steroids (enye i -Andriol elawulwa ngokomlomo yi-Testosterone Undecanoate) engabonakali nayiphi na imilinganiselo ye-hepatotoxicity. Ngako oko, ukunyuka kwamazinga okupasa kwe-Primobolan yomlomo kunokusetyenziswa kodwa kuyakufuneka kuqaphele ukuba umlomo we-Primobolan usenayo imilinganiselo yokuchasana nokuxhatshazwa kwegazi kunye nokuchithwa kwesibindi, ngoko ke umngcipheko we-hepatotoxicity ovela kwi-Primo akufanele ugqitywe ngokupheleleyo, ingakumbi Amanani e-Primobolan wefomathi yomlomo ayandiswa ukuya kumazinga aphakamileyo aphezulu.
Abasebenzisi besibhinqa bafuna ukuvuselela ukusebenza kunye nokuphuculwa komzimba kwi-Primobolan yomlomo baya kufumana induduzo kwaye bazuze kwi-50 - 75mg imihla ngemihla enobungozi obuncinane bokubakho.
I-Raw Methenolone i-Acetate powder (434-05-9)
I-Primobolan (i-Methenolone acetate) yenye yezona zinto zithandwa kakhulu kwi-bodybuilders kunye nabagijimi ngenxa yezibonelelo zayo ezintle eziza kufa. Kuchazwa ngabaninzi njengendlela yokulungisa epheleleyo imjikelezo ye-steroid. Yisisombululo esihle kakhulu kubo bonke abadlali kunye nabanomzimba abakhathazekayo okanye abajongene nemiba efana nokulimala kwesibindi, ukungcola, kunye neminye imiba yesibindi xa usebenzisa i-oral steroids njengoko kufikelele kwimiphumo emibi kunye neenzuzo ezingenakubalwa ezibandakanya;
Inceda ekuphakanyeni amandla kunye nombane wamanzi - abasebenzisi banokuthembela kule ngqungquthela ukwenzela ukwanda kwamandla kunye namandla ngexesha lomjikelezo wokubhukuda. Isebenza ngokuvumela ukugcinwa kwe-nitrogen ebalulekileyo kwimveliso yamandla.
①Aids ekwakheni imisipha-oku kwongezelela nokugcinwa kwe-nitrogen. Ukwakhiwa kwemizimba kubandakanya i-nitrogen, kwaye ngokunceda ekugcinweni kwe-nitrogen, i-steroid ishiya imeko efanelekileyo yokwakha izihlunu ezintsha kunye nokugcina abantu abadala.
②Imisela umngcipheko wesimo somntu-le steroid iyaziwa ngokuba yindawo ekhuselekileyo kwimarike kwaye abasebenzisi abasayi kuba nexhala ngeempendulo zabo.
③Inyusa izinga lokuphazamiseka kwenkunkuma-le yinjongo yayo ephambili; ekuncedeni kumjikelezo wokusika. Inceda ekunciphiseni i-fat fat body in which returns in aid in building muscle kunye nokwandisa amandla abasebenzisi.
Thenga i-Methenolone i-Acetate powder esuka eBuasas.com
I-Methenolone e-enanthate powder (303-42-4)